Xnxx: akara ngosi 3 bụ ndị kacha mma n’ihe ndina - teles relay
By bryanekobe	 emelitere ikpeazụ June 16, 2021
Rọrọ nrọ egwuregwu nke ịgba ọsọ na onye maara n'ezie etu esi eme ya? Lee akara ngosi kpakpando atọ a maara dị ka nke kachasị mma na akwa!
N’alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ị chọrọ inwe obi ụtọ na onye ga-ama ụzọ isi kpọga gị eluigwe nke asaa? Chọrọ iji otu n'ime abalị kachasị mma nke ndụ gị? Mara na ịgụ kpakpando nwere ike inyere gị aka ịchọta onye zuru oke iji nweta ya. N’ezie, ọ bụrụ n’ikwere ya ntakịrị, ị ga-achọpụta ọsọ ọsọ na ụfọdụ akara ngosi nwere ike inye gị oge dị egwu nke anụ ahụ. Ya mere, onye ka ị ga-echigharị maka abalị na-acha ọkụ na orgasm na-aga nke ọma? Ndị otu nchịkọta akụkọ nke Trendy na-akpọ gị oku ka ị chọpụta akara ngosi kpakpando atọ a maara nke ọma na bed. Asịla daalụ!
Ebe E Si Nweta: Gettyimages
Iji malite, mara na ebule ahụ bụ onye na-ahụ n'anya na-enwu ọkụ. Dị ka akara ọkụ ọ bụla na-asọpụrụ onwe ya, ndidi abụghị isi okwu ya ma ọ bụrụ na o kpebie ịtọ gị anya, ọ ga-achọ gị ozugbo ma n'egbughị oge. Ọ ga-aka njọ ma ọ bụrụ na i kpebie ịlụso ya ọgụ. N'ezie, ọ ga-anwa iduhie gị dị ka a ga - asị na ndụ ya dabere na ya ma ị ga - enwe mmetụta nke ọma na ị bụ onye kacha nwee mmekọahụ n'ụwa. Na mgbakwunye, ebule siri ike ma mgbe ọ bịara n'ihe gbasara mmekọahụ, ọ naghị ala azụ ka ọ bụrụ anụmanụ kacha mma. Dị ka ịgwa gị na ị ga - ejidere (e) na mgbidi! Agbanyeghị, ọ bụghị onye ọhụụ nke egwuregwu na ọ dị mma n'ihi na ọkụ ya ga-ejide ihe ọ bụla.
Ebe E Si Nweta: pexels
N’adịghị ka ebule ahụ, oké ehi ahụ hụrụ egwuregwu n’anya. Nnọọ vasatail, ọ ga-ama otu esi eji akụ ya eme ka ị rịa elu site na iji uche gị ise. N'etiti etiti aka, nsusu ọnụ na okwu ruru unyi na max, ị gaghị enwe oge iji ghọta ihe na-eme gị. Goolu ahụ ? Mee ka ị na-arịọ ya ka ọ kwụsị ya ma hụ gị n'anya ASAP. Ma mgbe ọ mere, ị gaghị akwa ụta ọ bụla n’ihi na ahụmịhe a ga-eme ka icheta ihe echefuru echefu. Sweettọ na njikere ime ihe ọ bụla maka gị ịnwe oge pụrụ iche, ị ga-apụta dị ka ị metụrụ mbara igwe aka. Gịnị mere na ị gaghị asị ya?
Ebe E Si Nweta: Getty Images
N’ikpeazu ghara iju gi anya imata na ejula nọ na ndepụta ahụ. N'ịbụ onye a ma ama maka ikike dị ịtụnanya ọ na-edina n'ihe ndina, ọ ga-abụrịrị mpụ na etinyeghị ya n'ọkwa a. Maka na agbanyeghị na akpị nwere ike bụrụ onye kacha njọ n’ụwa, ọ nweghị onye ga-agọnahụ ụdị mmekọ nwoke na nwanyị ọ bụ. Dị ka a na-elekwasị anya n'akụkụ mmetụta uche dịka na arụmọrụ ahụ, ọ na-ejikọta àgwà niile dị mkpa maka ịbịaru orgasm na-enweghị obere mgbalị. Nwere ike ịghọta ihe ị chọrọ ịrịgo na ákwà mgbochi ahụ n’agwaghị ya agwa, ọ bụ n’ezie mmuo nke akpị na-atụgharị uche na ebe nchekwa gị.
Edemede a pụtara izizi na: https://trendy.letudiant.fr
3 akara igwe kpakpandoudoxnxx